FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BULLDOG MENA-MENA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika bulldog mena-mena
Bulldog an'ny Tigra Mena-olon-dehibe, nahazo sitraka tamin'i Scott L. Amos, Sr.
Bulldog Brindle Mena
Bulldog an'ny Tigra Mena an'i Amosa
mena tahy-ger BUHL-dawg
Ny lohan'ny Bulldog Mena-mena dia tokony hiseho malalaka, fisaka ambony sy lava halavany miaraka amin'ny hozatry ny takolaka voatonona ary fijanonana miavaka. Ny lohany dia toa nokapohina naneho fahaiza-manao lehibe, hakanton'ny Bulldog ambanivohitra sy ny toetrany, ny lohan'ny RTB dia tokony hanome ny herin'ny hery goavambe, saingy tsy tokony hifandanja amin'ny haben'ny ankapobeny sy ny fanamafisana ny vatana.
Ny sakelaka dia tokony ho malalaka amin'ny vavorona misokatra malalaka eo ho eo amin'ny 2,5 '-3.5' ny sakamalaho dia tokony ho lehibe kokoa eo am-potony miaraka amin'ny savony antonony na kely mankany amin'ny orona. Ny molotra dia tokony ho feno pigmentation volontsôkôlà mena na mena no avela mavokely nefa tsy tiana. Voafaritra tsara ny saokany ary tokony ho na ny mifanongoa amin'ny molotra ambony aza fa tsy manarona azy, ny lavany sy ny sakany dia tokony hitovy amin'ny sisin'ny loha amin'ny ankapobeny.
Ny lokon'ny orona dia tsy maintsy mena na mena miloko volontany fotsiny. Mena mena / mena mainty / sôkôla na aty. Hadisoana kosmetika: loko mavokely, dudley na grick no hitranga fa heverina ho lesoka kosmetika. Tsy misy fisoratana anarana afaka / manafoana ny loko orona hafa ankoatry ny pigmentation volontany mena na mena. Anisan'izany ny mainty, volondavenona, manga na albinisma.
Ny Red-Tiger Bulldog dia manana nify fotsy sy fotsy lehibe ary tsy tokony ho hita rehefa mikatona ny vava. Tselatra tery ambany (hety miverimberina) tiana kokoa. Undershot hatramin'ny ½ santimetatra azo ekena (kely kokoa no tsara). Ny molotra dia somary matevina mena na mena mavo pigmentation manarona ny molotra miaraka avela mavokely. Fanamarihana: ny Bulldogs an'ny Tigra Mena dia karazany miasa ary tsy tokony hosaziana noho ny nifiny tapaka na tsy hita. Lesoka: nify kely. Manaikitra haavo na hety. Fanilihana: vava boloky na vava mikatona misy nify hita maso, vava Overshot na wry.
Ny maso Bulldog an'ny Red-Tiger dia tokony ho antonony sy amandy na miendrika boribory. Tokony hapetraka tsara sy antonony izy ireo mba hatokana be. Ny lokon'ny maso dia tsy maintsy atao. Hazel / maintso / volamena / volondavenona na manga. Tsy tokony ho hita ny haw. Ny pigmen-maso mena na mena-volontsôkôlà dia tsy maintsy atao loko hafa rehetra amin'ny pigmentation noheverina ho Disqualifying / Tsy misy fisoratana anarana Able.cosmetic fanampiny: Rehefa tsy mifanitsy amin'ny lokony ny maso roa, ohatra ny manga iray ny maso ary ny maso iray kosa manimba, ( ity dia antsoina hoe maso malemy) ary azo ekena sy irina amin'ny karazany Bulldog Mena-mena. Rehefa manga ny maso roa amin'ny karazany mena-tigra Bulldog (antsoina hoe vatomamy maso ity) ary azo ekena sy tsy takatry ny saina. Misy lesoka lehibe na maso tsy simetrika.
Ny maso Bulldog an'ny Red-Tiger dia tokony ho antonony sy amandy na miendrika boribory. Tokony hapetraka tsara sy antonony izy ireo mba hatokana be. Loko: loko maivana ny maso dia tsy maintsy atao. Hazel / maintso / volamena / volondavenona na manga.
Ny sofina dia tokony hapetraka avo amin'ny loha, antonony ny habeny ary aleony hety. Ity karazana ity dia tsy maintsy heverina rehefa ao amin'ny peratra fampisehoana. Tsy misy sofina voaongotra na voajanahary ary tsy mahay mampiseho. Miaraka amin'ireo fanilikilihana omena any amin'ny firenena izay tsy ara-dalàna ny fiompiana sy ny fiantsonana. Ivelan'ny peratra fampisehoana dia mety ho latsaka, semi-prick na rose izy ireo raha voajanahary. Ny lesoka ao amin'ny sofina dia sofin'alika sy sofina ramanavy.
Ny Red-Tiger Bulldog dia tsy misy afa-tsy amin'ny pheomelanin / hoditra amelanistika ary loko miloko mena sy mena mena. Ny Bulldog Red-Tiger dia tsy mamokatra santionany miaraka amin'ny volo palitao / manga na mainty ary koa ny Bulldog Red-Tiger dia mamokatra hoditra fotsy / manga na mainty.
Ny Red-Tiger Bulldog dia tokony hanana famolavolana palitao 'akanjo', manana loko 70% farafaharatsiny ary tsy mihoatra ny 30% fotsy. Ny lokony dia ho brindle sy fotsy miaraka amina valizy / lamba firakotra manify miitatra amin'ny vatana Karandoha boribory misy molotra fotsy misy doro fotsy no tiana kokoa, fa tsy voatery A voahangy fotsy no aleonao FA tapaka ny vozon'akanjo na tsy misy loko antenaina A tratra fotsy dia tsy maintsy atao Fotsy amin'ny tongotra no aleony, fotsy amin'ny ampahany amin'ny tongony sy tongony aoriana dia azo ekena. Fotsy kely misy marika amin'ny akanjo sy lamba firakotra vita amin'ny brindle azo ekena. Ny Red-Tiger Bulldog dia tsy mitovy afa-tsy amin'ny lokon'ny volontsôkôlà mena na mena, toy ny, brindle mena, brigle sôkôla, brindle aty ary brindle kanelina. Ny Red-Tiger Bulldog dia fantatra ihany koa amin'ny fampisehoana modely 'mosaic brindle' ao anatin'ny endriny, izay misy karazana brindle roa na maromaro miezaka maneho ny hevitr'izy ireo amin'ny biby iray ihany, ka nahatonga ny aloky ny brindle hipetraka amin'ny akanjo / lamba firakotra. aloky ny brindle hafa handrakofana ny tongotra anatiny, ambany sy valanoranony. Ny santionan'ny fiovan'ny mena-brindle amin'ny lamina palitao 'mosaic brindle' no tena sarobidy indrindra.
Ny vozon'ny RTB, dia tokony ho goavana sy mametraka, 'tsy' manify na kanto. Ny vozon'ny RTB dia natsangana tamim-pahefana mahery ary tokony haneho kilao kilao “ny fisehoana ara-batana ananany tanjaka lehibe”, ny vozony dia tokony ho midadasika indrindra eo am-potony, na dia hatramin'ny sakany aorinan'ny vodilanitra (aorian'ny loha)
pomeranian mifangaro amin'ny Shih Tzu alika kely
Ny lamosina ”dia tokony ho mafy orina sy mafy orina eo ambanin'ny hoditra izay tokony haneho famaritana antonony sy ampy, ny tsipika Top dia tokony haavo, ary avelao hidina ambany kely eo akaikin'ny malazo rehefa tanora. Roach tena antonony dia antenaina fa tsy amporisihina.
Ny faritry ny soroka / ambony ambony amin'ny RTB dia tonta toy ny mari-boninahitra, satria io no iray amin'ireo toetra mampanan-kery sy maharitra indrindra an'ny RTB. Ny soroky ny RTB, toy ny pads an'ny NFL mihazakazaka miverina dia mitarika ny alika hiditra sy amin'ny alàlan'ny fanoherana mahery vaika, sady miaro anao amin'ny fifandraisana be loatra. Ny soroka dia tokony ho iray amin'ireo toetra voafaritra kokoa / voaviravira kokoa amin'ny anatomin'ny hozatry ny RTB. Ny soroka dia tsy maintsy miseho mifehy, ary goavana, tokony hampiseho ny tsirairay amin'ireo faritra telo amin'ny hozatry ny trisep izy mandritra ny fihetsehana ary ny deltoids dia tokony hiseho ho tadin-tsolika roa mitarika mankany amin'ny tricep ka hatrany amin'ny faritra malazo sy hatoka.
Ny tratran'ny RTB dia tokony hiseho ho entina am-pireharehana ary manome ny fiheverana ho toy ny ampinga gladiatera na fiarovan-tratra nitarika azy hiady. Rehefa mipetraka, ny hozatry ny pectoral dia tokony hipoitra mandroso ary manambara ny habetsaky ny striation avo lenta apetraky ny deltoid / sy ny hozatry ny soroka. Rehefa mijoro io hozatry ny tratra io dia tokony hiseho matevina be ary tokony hapetaka amin'ny takelaka tratra / sternum ary avelao hisy toerana tsy hita mipoitra toy ny paosy kely roa mipetaka mipetraka eo amin'ny lafiny iray amin'ny taolana tratra.
Ny fehiloha dia tokony hiseho ho feno tavy amin'ny hozatra. Ny forearm na dia tsy manana hozatra goavambe aza dia tokony mbola maneho ny halalinany sy ny fisarahana eo anelanelan'ny vondrona hozatra maro amin'ity faritra ity. Tokony ho tery ny tanana. Tokony ho mafy orina izy raha ny mikasika ilay hozatra nopotserina ankoatry ny hamafin'ny taolana. Ny forearm dia tokony hampiharihary ny famaritana rehefa mijoro, rehefa mipetraka ary tsy maintsy mampiseho fipoahan'ny striation mandritra ny hetsika.
Ny 'ampahefatra avaratra' dia misy ireo vondrona hozatra mipoaka indrindra amin'ny anatomie iray an'ny RTB. Ny faran'ny ambaran'ny anatomie an'ny RTB dia ny hery mitarika azy io ary tokony haneho ara-batana ny fofon'aina amin'ny fatran'ny angovo sy ny hery mipoaka. Ny mpikambana tsirairay dia tokony ho boribory be na ao anatiny na any ivelany rehefa mijoro. Ny ampahefatra avaratra dia tokony hiseho ho voampanga ary vonona hipoaka amin'ny hetsika. Rehefa mihetsika, ny telovolana dia tokony hampiseho famaritana maromaro ary toa handrisika ny biby handroso amin'ny haavon'ny haavony voafehy.
Ny RTB dia mendri-pitokisana sy mahay manavaka, miaraka amin'ny faniriana hisikina ambany ny tompony. Ny fahatokisan-tena itondran'io karazany io eo imasony sy ilay sahy miangavy azy ireo, manakana ny trano / trano na fandrahonana manokana. Ny Red-Tiger Bulldog dia tsy mivadika amin'ny ankohonany foana fa mety tsy mandray tsara ny vahiny tsy notronina. Izy ireo dia mety manjakazaka sy mahery setra amin'ny alika sy biby hafahafa raha tsy vita printy / ampirisihina hanao izany hatramin'ny fahazazany. Manana mpamily haza mahery izy ireo. Ny fiofanana momba ny fiaraha-monina / fankatoavana aloha dia asaina manakana ny mety hisian'ny herisetra amin'ny alika hafahafa sy verinia kely toy ny biby. Mifanaraka tsara amin'ny alika sy biby mahazatra izy ireo. Ny Red-Tiger Bulldog dia mila tompona matanjaka sy tsy miovaova ary matoky tena. Ity karazana ity dia manan-tsaina sy dodona ny hampifaly azy, nefa mety ho mafy loha sy hanosika fotoana hilalaovana mandritra ny fotoam-pianarana. Ny fitsangatsanganana an-tongotra haingana na fialantsasatra fohy alohan'ny fotoam-pampiofanana dia mandoro angovo ampy hamahana an'io olana io. Ny fanitsiana malefaka sy ny fiderana am-bava be dia be dia miteraka valiny tsara. Fanitsiana ara-batana mahery setra izaitsizy na fahefana dia afaka manimba fahasimbana ara-batana tsy azo ovaina. Red-Tiger Bulldogs dia manana fahatsiarovana tsara ary mitazona lesona haingana. Zava-dehibe ny fahafantaran'ny Red-Tiger Bulldog fa ny mpikambana ao amin'ny fonosana olombelona dia ambony noho izy ireo amin'ny filaharana. Ny Red-Tiger Bulldog dia maneho fahalalam-pomba sy malefaka ary malemy paika amin'ny ankizy. Afaka mifanalavitra amin'ireo olon-tsy fantatra izy ireo satria ny fahaizan'ny mpiambina azy, fa hilamina kosa miaraka amin'ny fanomezan-tokin'ny tompony. Red-Tiger Bulldogs dia tena miaro ny tompony sy ny fananan'ny tompony ary tsy hivadika amin'izy ireo, na dia manome ny ainy aza.
Hahavony: 22 - 26 santimetatra (56 - 66 cm)
Lanja: 75 - 110 pounds (34 - 50 cm)
Ny Red-Tiger Bulldog dia mitaky sakafo tsy an-kijanona mandritra ny taona voalohany amin'ny fitomboana, ny fomba tsy fihinanan-kanina tsy tapaka, ny fisotroan-dronono, na ny tsy fahampian'ny sakafo maha-alika kely dia mety hiteraka pasterns na na hiketrika eo amin'ny tongony.
Ny Red-Tiger Bulldog dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha ampiasaina tsara. Tsy mihetsika izy ireo ao an-trano ary hanao izay tsara indrindra amin'ny tokotanin-tsaha farafahakeliny.
Ny Bulldog-Tigra Mena dia tokony horaisina amin'ny a dia an-tongotra lavitra isan'andro. Ity karazana ity dia mahomby amin'ny tanàna sy ny ambanivohitra, ny fotoana filalaovana tsy tapaka toy ny fanatanjahan-tena na ny fandehanana an-tongotra antonony. Alika mavitrika izy ireo ary tia manana toeram-pivoahana ara-batana. Ny RTB dia karazana 'fiaretana maharitra', novolavolaina tamin'ny firafitry ny atletisma mahia kokoa noho ny fahita amin'ny alika maro lova bulldog. Mipoaka izy ireo, mailaka ary mailaka, mitaky fanentanana ara-tsaina ary koa ara-batana.
12 - 16 taona eo ho eo
Ankizy 6 eo ho eo
Ny palitao fohy sy henjana dia mora karakaraina. Borosio ary borosy amin'ny borosy mafy volo, ary mandro raha tsy ilaina. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony. Ny Red-Tiger Bulldogs izay karazan-doko mifono fohy fotsiny dia mitaky fikarakarana kely, fanosotra sy fanasana tsy tapaka raha ilaina dia hitazona azy ireo ho mendrika. Ny fitsangatsanganana tsy tapaka dia hitazona ny hoho amin'ny halavany mahasalama.
Ny Red-Tiger Bulldog dia noforonin'i Rev. Scott L. Amos, Sr. sy ny zanany lahy, Scott Amos II ao amin'ny faritra afovoan'i Indiana any Etazonia, nanomboka ny taona 1991. Ny Red-Tiger Bulldog dia novolavolaina tamin'ny fototra mena -nosed Bulldog amerikana tompony ary novokarin'i Rev. Scott L. Amos, fantatra ihany koa amin'ny hoe 'Scott Free' sy ny fandaharan'asan'ny fiompiana iraisam-pirenena 'Amos American Bulldogs' sy 'Free-Style American Bulldogs'. Ny fisoratana anarana, ny firaketana ary ny fitehirizam-bokin'ny Red-Tiger Bulldog, ary ny Archive dia nahazo ny fisoratan-kevitry ny governemanta (Serial # 85002578) niaraka tamin'ny Biraon'ny Patent sy Trademark any Etazonia tamin'ny 1 Janoary 2011 ho toy ny 'The Red-Nosed (Breed) Bulldog voalohany teo amin'ny tantaran'ny izao tontolo izao'. Raha ny ankamaroan'ny karazana bulldog hafa dia mampiseho marika amin'ny nosed mena ho toetra tsy dia ilaina loatra ao anatin'ny fari-piainan'izy ireo mainty. Ny Amos dia namolavola ny Red-Tiger Bulldog hamokatra irery alika ny pheomelanin / hoditra amelanistic sy ny loko palitao mena na mena mena amin'ny endrika brindle. Ny teny hoe 'Tiger' amin'ny anaran'ny fiompiana dia nalaina avy tamin'ny tigra brindle toy ny fikororohana amin'ny endrika palitao Mena-Tigers. Ny ampahany 'Mena' amin'ny anaran'ny fiompiana dia milazalaza ny hoditra mena sy mena volontsôkôlà ary ny lokon'ny palitao, raha ny teny hoe 'Bulldog' amin'ny anarany dia mampiavaka ny lova ny fitambarana razana razambe.
Tamin'ny faramparan'ny taona 90 ny Rev. Amos dia nampiditra an'i Ca de Bou - Bulldog Mallorquin , Banter Bulldog ary madio Bulldog fotsy taloha génétika ho an'ny hery ivelan'ny hazo fijaliana Ity fampidirana be pitsiny ity dia namela ny aretina Red-Tiger Bulldog hahatratra ny ambaratonga avo kokoa amin'ny fahasalamana, ny rafitra voadio (mamela ny fiaretana mihombo), ary ny loha cephalic kokoa, ny rafi-pitabatabana sy ny taovam-pisefoana (izay mamela ny fifohana rivotra madio), fa tsy ny rafi-pisefoana mahantra ara-tantara izay misy amin'ny karazany bulldog maro hafa, izay avy amin'ny valanoranon'ny brachycephalic sy ny taovam-pisefoana mahazatra izay niavian'ny bulldog amin'ny ankapobeny.
Tamin'ny tapaky ny taona 2000, nanampy ny ra Bulldog mifangaro sy ny bulldog mifangaro avy any atsimon'i Etazonia ny The Amos, toa an'i Talladega, Huntsville, Birmingham, Alabama ary Bulldog / Boxer Strain izay novokarin'ny mpiompy Hobbyista Andriamatoa sy Ramatoa Kendrick Swain of Atlanta GA… hanitatra ny fiheverana ny tetirazan'ny razamben'ny RTB.
Na eo aza ny fivoarana tsy azo ihodivirana, efa nihoatra ny fotoam-pananganana sy fivoarana an'io Fambolena io ary ny RTB dia zava-misy tsara tarehy miorim-paka ao amin'ny History and archives of America.
Kennels Mena-Tiger Mena 'Faygo' ny alika Red-Tiger Bulldog amin'ny 4 volana— 'RTK's Red' Faygo 'dia novokarin'i Scott Amos, II tany Indiana Indiana. Mipetraka any avaratr'i Indiana izy izao miaraka amin'ny fianakavian'i Sanford. 'Faygo' dia heverina ho fanantenana matanjaka amin'ny fiompiana ary sarobidy noho ny lokony / ny endriny ary ny volon-dohany vita amin'ny kanelina mena sy ny lohany lahy. '
Kennels Mena-Tiger Mena 'Faygo' ny alika mena-tigra Bulldog amin'ny 4 volana
Alikakely Red-Tiger Bulldog miaraka amin'ny tompony falifaly, avy amin'i Scott L. Amos, Sr.
Alika kely-Tiger Bulldog miaraka amin'ny tompony falifaly, avy amin'ny fahalalam-panjakan'i Scott L. Amos, Sr.
sokola labozia chesapeake bay retriever mix
Red-Tiger Bulldog miaraka amin'ny tompony falifaly, Nahazoana lalana avy amin'i Scott L. Amos, Sr.
Bulldog-Red Tigra, Nahazoana lalana avy amin'i Matt Galvan, mpiompy bulldog mena-tigra, Detroit Michigan
Pups Bulldog Tigra Mena, Nahazoana lalana avy amin'ny Kennels-Tigra Mena
Alika kely Bulldog Tigra Mena, Nahazoana lalana avy amin'ny Kennels mena-tigra mena
Sary bulldog-tigra mena 1
alika mpiandry ondry alika tendrombohitra bernese
Alika kely pitbull 14 herinandro
amboa tendrombohitra Swiss lehibe kokoa
tahaka ny ahoana ny shorkies